Diabe ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fihinanan-kena - Ny Martsa Manerantany
ny VONAO TONTOLO faha-2 no namarana
SIGNED 83, RATIFIED 45. LOHAHEVITRA 5 NY FAMPANDROSOANA NY FAHASOAVAN'NY NUCLEARInfo
2 World martsa ho an'ny fandriampahalemana sy ny NoViolence
AVY AMIN'NY 2 OCTOBER 2019 HANOMPOANA 8 2020
TIANAO TOKONY MBOLA?
Ampandreneso ny toe-javatra mampidi-doza atahorana miaraka amina fifanoherana mitohy, manohy misondrotra, mampahafantatra hetsika tsara, manome feo ho an'ireo taranaka vaovao izay te hametraka ny kolontsaina tsy miraikitra.
Miaraka amin'ny alàlan'ny 1 ° World 2009-2010 93, dia nandeha nandritra ny 97 andro ny firenena 2 sy ny kontinanta dimy. Ity Diabe 2019 ™ ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fahazakana ny firenentsika nandritra ny taona 2020 sy XNUMX dia natolotra.
Oviana ary aiza
Ny 2ªMM dia hanomboka ao Madrid ny 2 tamin'ny oktobra 2019, Andro iraisam-pirenena ho an'ny tsy filaminana. Hialany amin'ny fitarihana an'i Afrika, Amerika, Oseania, Azia, tonga ao Madrid amin'ny 8 tamin'ny Martsa 2020, Andro iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy.
Vaovao farany an'ny Martsa
Nanomboka tany Madrid ny 2ª MM 2 Oktobra amin'ny 2019, Andro Iraisam-pirenena ho an'ny tsy Fahampiana, folo taona aorian'ny 1ª MM.
Mpikaroka hitsidika ny Martsa
Ny mpanamory ny filaharana dia mila mpanohana mba hahatratra ny mpijery ambony indrindra sy handray anjara.
Mifandray amin'ny tambajotra sosialy
Hitsangana amin'ny alalan'ny hetsika sy tetikasa avy amin'ny fotony sosialy izy ireo.
Betsaka kokoa ny sehatry ny fandraisana anjara noho ny ekipa mpanentana
Mandrindra ny hetsika, ny kalandrie ary ny lalana
Noho ny tantaran'ny 1º 2009-2010 World Martsa, nandritra ny andro 93 97 nitsidika firenena sy kaontinanta dimy. Noho ny zava-nitranga sy ny manana manana tondro ampy ny fandraisana anjara, ary na dia ny fanohanana lehibe kokoa fiarahamiasa ... dia hitsangana 2ª ho amin'izao tontolo izao Martsa fihavanana sy tsy hiady 2019-2020.
Milaza ny toe-javatra mampidi-doza maneran-tany amin'ny fifandirana mitombo
Tohizo ny fanentanana fa ny "fiadanana" sy ny "tsy filaminana"
Mba hampahafantarana ny hetsika tsara sy tsara isan-karazany izay ambaran'ny olona, ​​ny firaisankina ary ny vahoaka amin'ny toerana maro eo amin'ny fitarihana ny zon'olombelona.
Hanome feo ny taranaka vaovao izay te-handray sy handao marika